Ongororo-Yekutarisa Ongororo - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
analytics, Big Data Analytics, Kuona analytics
Munyika yanhasi inotungamirwa netekinoroji, dhata inogadzirwa pamwero wakakura kwazvo, nepo kugona kuunganidza nekuchengetedza dhata kuri kushoma, kugona kuongorora aya mavhoriyamu emitengo kunowedzera pamitengo yakaderera kwazvo. Iyi mukaha inotungamira kune nyowani matambudziko mukuferefeta, vangangoita vese vaongorori, vanoita sarudzo, mainjiniya, kana zvikwata zvekupindura zvechimbichimbi zvinoenderana neruzivo rwakavanzwa mune data. Iyo iri kubuda munda we anoongorora analytics inotarisa pakubata aya makuru, akasarudzika, uye masimba akasimba eruzivo nekubatanidza kutonga kwevanhu vachishandisa zvinomiririrwa uye nehunyanzvi hwekudyidzana mu maitiro ekuongorora. Zvakare, iko kusanganiswa kwenzvimbo dzakabatana dzekutsvagisa kusanganisira kuona, date kuchera, uye nhamba izvo zvinotendeuka anoongorora analytics mumunda unovimbisa wekutsvaga.
Ongororo yekuona ingangoita munda wekudzidza unotarisa pamifananidzo yekuona yakadai sevara, mutsetse, magadzirirwo, zviyero, Nezvimwewo kuti utsanangure ruzivo rwakapihwa rwunotarisa kufunga kwekuongorora kunoitiswa neanopindirana ekuona mukati. Iyo inoshandisa akasiyana maitiro uye ekuona algorithms kuongorora iyo data uye kududzira mhedzisiro yekutora sarudzo. Vanhu vari munzvimbo dzakasiyana siyana vanoshandisa anoongorora analytics yekutsvaga kwedatha uye kuongororwa kwedata. Kuona analytics inoita kuti huwandu hweruzivo rwakaomarara huve nyore uye inoita kuti mabhizinesi anzwisise data nekukurumidza uye kuita nekukurumidza, zvirinani sarudzo. Icho hunyanzvi pamwe nesainzi yekufunga kwekufunga kwakatsigirwa kuumbiridza dhata rekuona.
Inoona sei analytics inoshanda?
Izvi zvinogona kunzwisiswa kubva pamuenzaniso uri nyore. Mushandisi weThinka angangotanga nemubvunzo wekutanga kana basa mupfungwa dzake, otsvaga data rakakodzera zvakafanana, uye wozogadzirira ongororo yaro.
Step 1: Iko kutenderera kwekutarisa kuongorora kunotanga nebasa kana mibvunzo yebhizinesi inopindurwa. Semuenzaniso, maneja wepamba kufona angabvunza mibvunzo inotevera:
Ndeapi mafoni anogamuchirwa pamwedzi?
Mafoni anobva kupi?
Ndedzipi mhando dzepamusoro dzekufona?
Ndiani anopindura zvakanyanya kana kusadana?
Step 2: Nhanho inotevera ndeyekuziva iyo sosi yakakosha yedata uye nekuisa pamberi pekuti ndedzipi dzinonyanya kukanganisa nehukuru hwevateereri. Uyezve, iyo dhata inoda kuve yakarongeka uye kuongororwa kwakadzama kweiyo imwecheteyo inofanirwa kuitwa.
Step 3: Mushure mekutora data, zvakakosha kuti uongorore iyo data nekuwedzera matanho uye zviyero kune maonero ekuona kwakanaka. Panguva ipi neipi musiki anogona kuchinja mhando yekuona.
Zvakare, panguva yekuwongorora, iye / iye anogona kuona kuti pane chikonzero chewedzero dhata, saka iye / iye anogona kudzokera kuti awane imwe data, uye osarudza mamepu matsva ekuona.
Step 4: Mushure mekunge iyo data yaongororwa, zvakakosha kumiririra data mune rakadai kuti rikwanise kutaurirana zviono nenzira yakakwana, inobata.
Izvi zvaizobatsira musiki kukudziridza kunzwisiswa kuri nani kwebasa rakatangwa uye zvaizopa nzwisiso iri nani yekuwana mhinduro yemubvunzo wakapihwa.
Visual Analytics inzira isiri yemitsetse inobatsira kuburitsa mapatani mune yakapihwa data nerubatsiro rwezvakasiyana maturusi nematekiniki anotarisa kuti uwane zvisingatarisirwe, gadzira ruzivo, uyezve, uwane nzwisiso ine simba kubva kune rakakura data.